Side Hustle - कसरी तपाईंको विचारलाई पैसामा परिवर्तन गर्ने - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक जनवरी 30, 2021 जनवरी 30, 2021 रोबर्ट मोमेन्ट अफगानिस्तान फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, अफ्रीका फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, अरबी फ्रीलान्स, अर्जेन्टिना फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, B2B, बंगलादेश फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, बेलायत फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, क्यानडा फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, चीनियाँ स्वतन्त्रता, चेकोस्लोवाकिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, डेनमार्क फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रान्स फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, जर्मनी फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, gigs, बिक्रीको लागि Gigs, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्रीस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, ह Hongक Kong फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, हंगेरी फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, इन्डोनेसिया फ्रिल्यान्स ग्लोबल गिग, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, इटाली फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, जापान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, लिबिया फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, मेक्सिको फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, नेपाल फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, नाइजेरिया फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पाकिस्तान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रूस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, साइड Gigs, दक्षिण अफ्रीका फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, दक्षिण अमेरिकी फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, दक्षिण कोरिया फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, थाईल्याण्ड फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, टर्की फ्रीलान्स ग्लोबल गिग्स, युक्रेन फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री, विश्व फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग
व्यापार सफल हुनको लागि, यसले दुई मध्ये एउटा चीज गर्नु आवश्यक छ: त्यसले कि त समस्या हल गर्नुपर्दछ वा आवश्यकताको सेवा गर्नुपर्दछ।
तपाईं एक सामाजिक मिडिया प्रबन्धक, भर्चुअल सहायक, पुनःसुरु लेखक, अन्तर्वार्ता कोच, बेक, कुकुरहरू कुर्न, अनलाइन सर्वेक्षण लिन, कला बेच्न, वेबसाइटहरू वा आइटम फ्लिपिंग र अपसाइक्लिling् बन्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको डोमेन तपाईंको व्यवसायको नामसँग मिल्नुपर्दछ, र यो सकेसम्म स्पष्ट हुनुपर्दछ।
एक सफल पक्ष रफ्तारले अधिक विवेकी आय, सुरक्षा, कौशल वृद्धि, र उद्देश्यको एक नयाँ भावना प्रदान गर्न सक्दछ। एक सफल साइड हस्टल शुरू गर्नु धेरै धारणा भन्दा धेरै प्राप्य छ। सही रणनीतिको साथ, तपाईं आफ्नो विचारहरूमार्फत पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ।
व्यापार सफल हुनको लागि, यसले दुई मध्ये एउटा चीज गर्नु आवश्यक छ: यसले कि त समस्या हल गर्नुपर्दछ or एक आवश्यकता पूरा गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो MBA आवश्यक पर्दैन रेजुमे लेख्न कोर्स सिर्जना गर्न वा प्रकाशित फोटोग्राफर हुनको लागि आफ्नो फोटोहरू स्टक छविहरूको रूपमा बेच्न। एकचोटि तपाईंले समस्या पहिचान गरेपछि तपाईले आफ्ना ग्राहकहरुलाई समाधान प्रदान गर्नु पर्छ।
खरीद रिपोर्ट खरीद गर्नुहोस्: ईन्जिनियरि R्ग आर एंड डी सेवाहरू आउटसोर्सिंग मार्केट एनालिसिस, प्रवृत्ति र २०२ 2027 सम्म पूर्वानुमान
अनुसन्धान रिपोर्ट खरीद गर्नुहोस्: बाँझ र एंटीवायरल प्याकेजि Market बजार आकार, प्रचलनहरू र पूर्वानुमान -२०२।
खरीद रिपोर्ट: पेपर कोर मार्केट ग्रोथ, ट्रेन्ड्स - रिपोर्ट, २०२
खरीद रिपोर्ट: ल्युसिन मार्केट साइज, सेयर, ग्रोथ - ग्लोबल रिपोर्ट, २०२
अनुसन्धान रिपोर्ट खरीद गर्नुहोस्: लेनदेन प्रकार र लेनदेन द्वारा २०nt२ सालको सिंथेटिक हड्डी ग्रफ्ट विकल्प बजार
एक सफल साइड हसल शुरू गर्नका लागि चरणहरू
चरण १: तपाईको छेउ हस्टलमा निर्णय लिनुहोस्
एक सफल साइड हस्टल शुरू गर्नका लागि पहिलो चरण भनेको तपाइँ के गर्नुहुन्छ भनेर निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईंलाई प्रेरणा दिन यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
उपभोक्ताको आवश्यकता / समस्या: एक पेशेवर डिजाइन लोगो आवश्यक छ तर ठूलो बजेट (समस्या) छैन।
तपाईंको समाधान: छिटो र सस्तोमा एक सरल तर सौन्दर्य मनपर्दो लोगो डिजाइन गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग ग्राफिक डिजाइनका लागि सीपहरू र संसाधनहरू छन् भने, तपाईं स्वतन्त्र प्लेटफर्महरू मार्फत अनलाइन आफ्नो डिजाइन सेवाहरू बेच्न सक्नुहुनेछ फ्रीलान्स ग्लोबल गिग। यसले तपाइँलाई तपाइँको समय अनुमति भन्दा धेरै ग्राहक लिन को लागी अनुमति दिनेछ। त्यहाँ थप स्केलेबल अवसरहरू जस्तै टेम्पलेटहरू, फ्लायरहरू, र ब्रोशरहरू बेच्ने अवसरहरू छन्।
उपभोक्ताको आवश्यकता / समस्या: घर अफिस स्थानबाट राम्रोसँग डिजाइन गरिएको कामको आवश्यक छ तर उनीहरूको दृश्य (समस्या) कसरी कार्यान्वयन गर्ने थाहा छैन।
तपाईंको समाधान: तपाईं परामर्श प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ, मुड बोर्ड सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, दिशा प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ, वा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई सुरूवातबाट अन्त्यसम्म लिन सक्नुहुनेछ तपाईंको ग्राहकलाई उनीहरूले सपना देखेको ठाउँ पाउन।
यदि तपाईंसँग ईन्टीरियर डिजाइनको स्वभाव छ भने, तपाईं आफ्नो सीप र विचारहरूको बन्द पैसा बनाउन सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंलाई आन्तरिक डिजाइन सेवाहरू बेच्न औपचारिक शिक्षा वा प्रशिक्षण आवश्यक पर्दैन। घर कार्यालय, शिशु नर्सरी, भान्सा, बाथरूम, वा ल्याण्डस्केपि design डिजाईन जस्ता एउटा आला छान्नुहोस् र तपाईंको सेवाहरू र अनुभव प्रदर्शन गर्न एक वेबसाइट सिर्जना गर्नुहोस्।
धेरै व्यक्ति वजन कम गर्न, आकार पाउन, र जिम जान संघर्ष गर्दछन्। एक व्यक्तिगत ट्रेनर को समर्थन को माध्यम बाट, यी व्यक्तिहरु को आफ्नो फिटनेस लक्ष्य पुग्न को एक धेरै ठूलो मौका हुनेछ।
उपभोक्ताको आवश्यकता / समस्या: तौल घटाउन आवश्यक छ तर जिमबाट डराएर निराश महसुस (समस्या)।
तपाईंको समाधान: तपाईं स्पष्ट लिखित कसरत योजना प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई उत्तरदायी राख्न सक्नुहुनेछ उनीहरूसँग हप्तामा times पटक अनलाइन काम गरेर।
धेरै व्यक्ति वजन कम गर्न, आकार पाउन, र जिम जान संघर्ष गर्दछन्। एक व्यक्तिगत ट्रेनर को समर्थन को माध्यम बाट, यी व्यक्तिहरु को आफ्नो फिटनेस लक्ष्य पुग्न को एक धेरै ठूलो मौका हुनेछ। यदि तपाईंसँग फिटनेसको लागि उत्कटता छ भने, तपाईं अनलाइन व्यक्तिगत ट्रेनरको रूपमा साइड हस्टल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। योग्यताहरू अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ र साँझ र सप्ताहन्तमा पछ्याउन सकिन्छ।
निजी क्याटरर वा शेफ
उपभोक्ताको आवश्यकता / समस्या: एक आमा जसले आफ्नो परिवारलाई स्वादिष्ट र पौष्टिक homecooked भोजन खुवाउन आवश्यक छ तर काममा यति व्यस्त छ र बच्चाहरू उठाउनको लागि उनीसँग खाना पकाउन र किनमेल गर्न सीमित समय छ (समस्या)।
तपाईको समाधान: हप्ताको प्रत्येक रात स्वस्थ खाना पकाउनुहोस् र तिनीहरूलाई तपाइँको ग्राहकको घरमा पुर्‍याउनुहोस्, त्यसोभए उनीहरूले गर्नुपर्ने सबै थोकलाई समाधान गर्नुहोस् (समाधान)।
पाक कला सीपहरु अत्यधिक पछि खोजिन्छ र द्वारा आउन अक्सर गाह्रो छ। यदि कोही राम्रो कुक हो भने पनि, यो किराने किन्न किनमेल गर्न, नयाँ रेसिपीहरू अनुसन्धान गर्न, र हप्ताको हरेक रात खाना तयार गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तपाईंको व्यवसायले व्यस्त परिवार, पेशेवरहरू, र तिनीहरू जो पकाउन चाहँदैनन् मद्दत गर्दछ।
यी चार अनगिन्ती विकल्पहरू मात्र हुन्। तपाईं एक सामाजिक मिडिया प्रबन्धक, भर्चुअल सहायक, पुनःसुरु लेखक, अन्तर्वार्ता कोच, बेक गर्न, कुकुरहरू हिड्न, अनलाइन सर्वेक्षण लिन, कला बेच्न, वेबसाइटहरू वा आइटम फ्लिपिंग र अपसाइक्लि .् बन्न सक्नुहुन्छ। एक साइड रेट छान्नुहोस् जुन तपाईंको स्किलसेट र संसाधनहरूसँग मिल्दछ जब समस्या र आवश्यकता समाधान गर्दछ।
चरण २: व्यापार योजना सिर्जना गर्नुहोस्
त्यहाँ साइड कारबाही शुरू गर्दा विचार गर्न धेरै कारकहरू छन्। तपाईंको व्यापार योजनामा ​​काम सुरु गर्नु अघि आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस्:
म हरेक हप्ता मेरो छेउको हसलमा कती समय दिन सक्छु?
म कति पैसा लगानी गर्न सक्षम छु (उदाहरणका लागि वेबसाइट डिजाइन, मार्केटिंग खर्च, आदि)?
म के सेवाहरू प्रस्ताव गर्नेछु? कसरी मेरो मूल्य संरचना हुनेछ?
सम्भावित ग्राहकहरूले मेरो व्यवसायको बारेमा कसरी फेला पार्न सक्छन्?
अनलाइन वा तपाइँको स्थानीय वाणिज्य संगठन मा नि: शुल्क व्यवसाय योजना टेम्पलेट्स धेरै छन्। जे होस् तपाई सायद यो रकम प्राप्त गर्न प्रयोग गर्नुहुन्न, यसले तपाईलाई दिशा र एक योजना प्रदान गर्दछ जुन तपाईको छेउमा हस्टल बनाउनको लागि तपाईले निरन्तर अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण:: एक डोमेन किन्नुहोस् र तपाइँको वेबसाइट सेट अप गर्नुहोस्
हामी भर्चुअल विश्वमा बाँचिरहेका छौं, र सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईंको वेबसाइट अझ बढी जानकारी प्राप्त गर्नका लागि खोज्नेछन्। एक अनलाइन उपस्थिति, विशेष गरी एक वेबसाइट, तपाइँको व्यवसाय लाई पेशेवर र विश्वासनीय देखिने बनाउँदछ।
तपाईंको डोमेन तपाईंको व्यवसायको नामसँग मिल्नुपर्दछ, र यो सकेसम्म स्पष्ट हुनुपर्दछ। आदर्श रूपमा, यसले तपाइँको व्यवसाय के हो भन्ने पनि समावेश गर्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि, "RusticInteriorDesign.com" वा "CityPersonalTraining.com।" यदि तपाईंको बजेट कडा छ भने, तपाईं लोगो डिजाइन गर्न PicMoney वा Canva जस्तै डिजाइन कार्यक्रमहरूको निःशुल्क संस्करणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साधारण वेबसाइट महँगो हुनु आवश्यक पर्दैन। त्यहाँ धेरै ट्यूटोरियलहरू छन् र नि: शुल्क संसाधनहरू अनलाइन छन् जुन तपाईंलाई यसलाई सेट अप गर्ने प्रक्रियाको माध्यमबाट निर्देशित गर्दछ, वा तपाईं फ्रिल्यान्सरको सेवाहरू भाडामा लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईं ग्राहकहरू र ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने एक मात्र तरिका उनीहरूको अगाडि तपाईंको व्यवसाय राख्नु हो।
चरण:: तपाईंको व्यवसायलाई मार्केटिंग गर्दै
तपाईं ग्राहकहरू र ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने एक मात्र तरिका उनीहरूको अगाडि तपाईंको व्यवसाय राख्नु हो। त्यहाँ धेरै निःशुल्क र भुक्तान विज्ञापन रणनीतिहरू तपाईं उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले पछ्याउनको लागि मार्केटिंग विधिहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं पुग्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ डेमोग्राफिक र तपाईंको बजेटमा।
सामाजिक मिडिया तपाइँको पछ्याउनको लागि एक उत्तम अवसर हो, र तपाइँ नि: शुल्क खाताहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ एक निश्चित उमेर समूह छ जहाँ तपाईं लक्ष्य खोज्दै हुनुहुन्छ, एक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म अन्य भन्दा राम्रो हुन सक्छ। तपाईं बहु प्लेटफार्महरूमा खाताहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। त्योले भन्यो, तपाईले सबै खाताहरूमा पोष्ट गर्न याद गर्नुपर्नेछ। एक परित्याग गरिएको पृष्ठ व्यवसायको लागि खराब छ। जब तपाईंको सोशल मिडिया पृष्ठहरू जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र टिकटोक सिर्जना गर्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ह्याण्डलले तपाईंको डोमेनसँग मेल खान्छ। यसले व्यक्तिलाई पत्ता लगाउन र तपाईंलाई पछ्याउन धेरै नै सजिलो बनाउँदछ। तपाइँका सबै पोष्टहरूमा मूल्य प्रदान गर्नुहोस्। शैक्षिक र मनोरन्जनात्मक पोष्टहरू तपाईंको निम्न बढ्नेछ।
सामाजिक मिडियाको अतिरिक्त, तपाइँ साथीहरू र परिवारमा पुग्नु पर्छ र तिनीहरूलाई तपाइँको नयाँ साइड हस्टलको बारेमा बताउनु पर्छ। रेफरलहरू एक उत्तम तरीका हो तपाईको पहिलो बिक्री प्राप्त गर्न वा तपाइँको पहिलो ग्राहकहरुमा हस्ताक्षर गर्न। जब तपाईं अधिक ग्राहकहरू वा ग्राहकहरू पाउनुहुन्छ, प्रशंसापत्र, चित्र, वा समीक्षाहरू सुरक्षित गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो पोर्टफोलियोमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भविष्यका ग्राहकहरूमा तान्न मद्दत गर्न।
चरण:: सधैं गुणवत्ता प्रदान गर्नुहोस्
जब जीवन व्यस्त र अराजक हुन्छ, तपाइँ तपाइँको छेउको हगललाई बेवास्ता गर्न वा यसलाई रोक्नको लागि प्रलोभनमा पर्न सक्नुहुन्छ। मानौं तपाईं एक स्वतन्त्र ग्राफिक डिजाइनर हो र तपाईं सप्ताह को मा एक लोगो दुई दिन मा डिजाइन डिजाइन प्राप्त, तर तपाईं साथीहरु संग योजना छ। यदि तपाईं यो अर्डरलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ वा तुरून्त गुणवत्ता सेवा प्रदान गर्न असफल हुनुभयो भने, यो तपाईंको व्यवसायलाई हानिकारक हुन सक्छ। सँधै गुणवत्ताको काम पुर्‍याउनुहोस्, र तपाइँको छेउ हस्टल सफल हुनेछ। तपाईंको ग्राहक वा ग्राहकलाई असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान गर्नुहोस्।
सफल साइड हस्टलको रहस्य
मैले भर्खरै छोडिएको रूपमा, यो तपाईंको साइड हस्टललाई बेवास्ता गर्न आकर्षक हुन सक्छ जब अन्य चीजहरू माथि आउँछन्। यो तपाईंको मुख्य धारा आय होईन भनेर, तपाईंले समर्पणको समान भावना महसुस गर्न सक्नुहुन्न।
सुरुमा, यस्तो लाग्न सक्छ कि तपाईले दुई पटकको लागि छनौट गरिरहनु भएको छ। जे होस्, जब तपाइँ कुनै कुरामा काम गर्न जानुहुन्छ तपाइँ उत्साहित हुनुहुनेछ - यो सन्तुलन हो! तपाईंको मानसिकता भिन्नता को एक दुनिया बनाउँछ। केवल किनभने यसले पैसा कमाउँछ यसको मतलब यो "काम" छैन।
एक साइड रेट शुरू गर्दा, यो द्वारा खपत हुन सजिलो हुन सक्छ। तपाईं पछि ओछ्यानमा जान सक्नुहुन्छ, बाहिर काम गर्न रोक्नुहोस् र तपाईंको डेस्कमा तपाईंको सबै खाना खान शुरू गर्नुहोस्। यो तपाईंको स्वास्थ्य र तपाईंको व्यवसायलाई हानिकारक हुन सक्छ। इष्टतम शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यले तपाईंलाई अधिक रचनात्मक, ध्यान केन्द्रित, र समस्या समाधानमा अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ। तालिका विच्छेद, अनप्लग गर्ने समय, जिममा हिट, र पौष्टिक खानाको आनन्द लिनुहोस्।
सबै भन्दा माथि, तपाईंको साइड हस्टल मनिफेस्टो सम्झनुहोस्। यस पृष्ठ बचत गर्नुहोस् वा निम्न घोषणापत्र प्रिन्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईं यसलाई प्राय: फेरि सन्दर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यी बानीहरू तपाइँको विचारहरूको साथ कुनै समय बिना पैसा बनाउने छ:
साइड हस्टल मनिफेस्टो
तलको बानीहरू प्रत्येक उद्यमीको घोषणापत्रको एक हिस्सा हुनुपर्दछ:
आँफैमा बिश्वास गर।
सधैं सकारात्मक रहनुहोस्।
निडर मानसिकता विकास गर्नुहोस्।
तपाइँका लक्ष्यहरूमा केन्द्रित रहनुहोस्।
प्रत्येक दिन कडा परिश्रम गर्नुहोस्।
बक्सको बाहिर सोच्नुहोस् (अझ राम्रो - “बक्स टाढा फाल्नुहोस्”)
लगनशीलताको मनोवृत्ति विकास गर्नुहोस्।
कहिले हार नमानु।
यदि तपाईं थप पैसा ल्याउन सुरू गर्न चाहनुहुन्छ भने, नयाँ सीप सिक्नुहोस्, र आफैलाई नयाँ उद्देश्य दिनुहोस्, एक पक्ष हडताल शुरू एक सन्तोषजनक प्रयास हो। सबैजनासँग विशेष सीप र विशेषताहरू हुन्छन् जसले समस्याहरू समाधान गर्दछ र अन्यको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। तपाईंको सफल साइड हस्टल आज सुरू गर्नका लागि यहाँ सूचीबद्ध चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्!
शीर्षक पुस्तकको अंशहरू मानसिक रूपमा कडा उद्यमी.
व्यापार सल्लाह सांप्रदायिक समाचार उद्यमी व्यवसायी उद्यमी महिला उद्यमीहरू छेउ सुरुवातमा स्टार्टअप सल्लाह स्टार्टअप व्यवसाय स्टार्टअपहरू महिला उद्यमी
रोबर्ट मोमेन्ट मानसिक शक्ति जीवन कोच, आध्यात्मिक कोच र मानसिक रूपले मजबूत उद्यमीका लेखक र मानसिक रूपले कडा महिलाको १ Hab वटा आदिका हुन्। रोबर्ट इम्पोस्टर सिन्ड्रोमलाई कसरी पार गर्ने र सोचविचार गर्न, बाहिरको स्थिति, रणनीति बनाउने र लाभदायक नतिजाको लागि उनीहरूको प्रतिस्पर्धा बेच्नको लागि मानसिक रूपमा कडा बन्ने महिला उद्यमीहरूको कोचिंगमा माहिर छन्। तपाईको नि: शुल्क १ 13 मिनेट रणनीति कल अनुसूची गर्न तपाईंको ब्यापार गोलहरू छलफल गर्नका लागि अब उनको साइट हेर्नुहोस्।
२०२१ को लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा शीर्ष Finance वित्त कार्यक्रम
तपाईको कम्पनीलाई २०२१ सम्म कसरी मद्दत गर्ने